Insulation Plastika Padlock BD-8531AS ~ 35AS - Fitaovana fiarovana Marst China (Tianjin) Co., Ltd.
Tombony sy fahaiza-manao
PVC Tags sy ny famantarana
Safety Padlock fitoeran'entana
Wall nitaingina Eye Wash
Mitsangàna Eye Wash
Mitambatra Eye Wash
Porofo fipoahana miaraka amin'ny Cable mafana Hivaingana kosa mahatohitra Eye Wash & fandroana
Fanasan-maso azo entina
Rapid Response Portable Decontamination fandroana
Deck tsoavaly Eye Wash
Shoe Ny fanaovantsika Machine
Pu tsindrona Machine
Fast Welt Cotton-mameno Machine
Kiraro Tongue fametahaka marika Machine
Famantarana fipoahana miaraka amin'ny ...
Toeram-panasana maso azo entina maso BD-600A (35L)
Insulated plastika padlock BD-8531BS ~ 35BS
Security Padlock BD-8511/21 / 25BS
Security Padlock BD-8511/21 / 25CS
Namboarina Stainless Steel Cable Length Lockout
Fanamafisana plastika padlock BD-8531AS ~ 35AS
FOB Price: Mba andefaso olona antsika
Min. Order Quantity: 1 miray
Seranan-tsambo fandefasana: Tianjin, Sina
Supply Fahaizana: 1000 sekely isan'andro
Habe: 100 * 40 * 24mm
Kitapo fiarovana sy maro hafa
Ny vatan'ny hidin'ny nilona sy ny fonosana nylon dia mifangaro tsara, miaraka amin'ny kalitao tsy mitarika, manohitra ny andriamby, manaporofo ny fipoahana.
Nylon shackle dia tsy mitarika, indrindra mety amin'ny indostria simika, miaramila, fitrandrahana, fahefana ary mora mirehitra ary
Halaviran'ny vatan'ny vatana: 45mm ny halavany, 40mm ny sakany, 19mm ny hateviny; Shackle Diameter 6mm, Shackle Haavo 38mm.
Ny fametahana padlock rehetra dia porofo mipoaka, fanoherana ny magnetisma, insulation, fanoherana ny harafesina.
Ampidiro ny labozia fampitandremana vatana 2, afaka manoratra ny mombamomba ny tompony.
BD-8531AS Keyed mba mitovy, fanalahidy-fihazonana
BD-8532AS Keyed mitovy, fanalahidy-fihazonana
BD-8533AS Master & mitovy, fanalahidy-fihazonana
BD-8534AS Master & mitovy, fanalahidy-fihazonana
BD-8535AS Keyed mba mitovy, fanalahidy-fihazonana
BD-8536AS Keyed mitovy, fanalahidy-fihazonana
BD-8537AS Master & mitovy, fanalahidy-fihazonana
BD-8538AS Master & mitovy, fanalahidy-fihazonana
Previous: Insulated plastika padlock BD-8531BS ~ 35BS
Manaraka: Lockout Cable azo ovaina BD-8415/16
Ny padlocks fiarovana dia manana andraikitra fitantanana. Noho ny fiasa sy fahazoan-dàlana samy hafa dia mizara karazany maromaro ny lakile:
1. Tsy misy andian-tsarimihetsika misokatra: ny padlock fiarovana tsirairay dia manana lakile tokana, izay tsy azo sokafana eo anelanelan'ny hidy;
2. Misokatra andian-dahatsoratra manan-danja: alao antoka fa ny padlocks rehetra ao amin'ny vondrona dia azo sokafana miaraka, ary ny lakile iray na maromaro afaka manokatra padlocks rehetra ao amin'ny vondrona. Ny vondrona marobe dia azo faritana ary ny vondrona tsy azo sokafana;
3. Andian-tsarimihetsika mahafehy: ny kitapo fiarovana tsirairay ao amin'ny vondrona voatondro dia mifehy ny lakile tokana. Tsy azo vohana ny padlock security sy ny padlock security, fa misy lakilen'ny master izay afaka manokatra ny padlocks fiarovana rehetra ao amin'ny vondrona; vondrona maromaro azo namboarina, ary ny lakilen'ny master eo anelanelan'ny vondrona dia tsy azo sokafana miaraka, fa ny lakilen'ny master avo kokoa dia azo tendrena hanokatra padlocks rehetra ao amin'ny vondrona;
4. Master series: aorian'ny vondrona maromaro misy andian-java-misokatra misokatra ao amin'ny vondrona, raha ilaina ny manendry mpanara-maso ambaratonga avo kokoa hanokafana ireo vondrona rehetra, dia azo ampiana ny lakilen'ny master ihany.
1. Varotra mivantana amin'ny orinasa.
2. Mahasarika maso sy azo antoka.
3. Milamina sy mateza.
4. Famaritana marobe azo alaina.
5. Fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ary arovy ny ainao amin'ny fomba lehibe indrindra.
6. Manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary mitsitsy vola.
Security Padlocks Series:
Ny padlock fiarovana dia karazana hidin-trano fiarovana. Ny lozisialy fiarovana azo antoka dia mizara ho fiarovana ara-piarovana, hidin-tsolika elektrika, hidin-tsolika elektrika, hidin-trano fanapahana, hidin-trano ary hidin-tariby vy, sns. Amin'ny ankapobeny, ny takona fiarovana dia ampiasaina miaraka amin'ny hidin-trano hafa. Ny hidy fiarovana dia azo ampiasaina irery, fa ny hidin-trano hafa kosa tsy azo atao, noho izany ny fampiharana ny padlock fiarovana dia malalaka be.
Isika matetika mampiasa ny ABS fiarovana padlocks, misy 16 loko anisan'izany ny mainty, mavo, mavokely, fotsy, maizina maitso, manga, voasary, mena, fotsy, volontany, volomparasy, vy fotsy volo, maitso, mazava manga, fahazavana voasary, fahazavana mena.
Fa rehefa mampiasa herinaratra faritra amin'ny mpandika, dia mila fiarovana tocollocate ny insulation padlock. Ary tamin 'ny tontolo iainana ny harafesiny sy marrine, dia ilaintsika ny mifidy Stainless Steel Shackle Safety Padlock.
Raha fampiasana tontolo iainana dia maloto, dia afaka manolotra Vovoka-porofo fiarovana padlock mba lavaka madio.
Vokatra Model No. Description
Safety Padlock BD-8511 Halavany 45mm, 40mm sakany, 19mm matevina. Haavony amina: 25mm
BD-8521 Halavany 45mm, 40mm sakany, 19mm matevina. Haavony amina: 38mm
BD-8525 Halavany 45mm, 40mm sakany, 19mm matevina. Haavo Shackle: 76mm
Steel hidy vy BD-85A11 Sakany: 30mm, hahavony: 26mm, hatevin'ny 16mm. Haavon'ny gadra: Mazava ny haavony 21mm, Diameter 5mm, elanelana: 15mm.
BD-85A15 Sakany: 30mm, hahavony: 26mm, hatevin'ny 16mm. Haavon'ny famatorana: haavo mazava 40mm, savaivony 5mm, elanelana: 15mm.
BD-85A21 Sakany: 40mm, hahavony: 32mm, hatevin'ny 20mm. Haavon'ny gadra: Mazava mazava 26mm, Diameter 7.2mm, elanelana: 20mm.
BD-85A25 Sakany: 40mm, hahavony: 32mm, hatevin'ny 20mm. Haavon'ny gadra: Mazava mazava 46mm, Diameter 7.2mm, elanelana: 20mm.
BD-85A31 Sakany: 50mm, hahavony: 38mm, hatevin'ny 20mm. Haavon'ny gadra: Mazava 30mm ny haavony, 9mm ny savaivony, elanelana: 23mm.
BD-85A36 Sakany: 50mm, hahavony: 38mm, hatevin'ny 20mm. Haavon'ny gadra: mazava haavo 59mm, Diameter 9mm, elanelana: 23mm.
BD-85A41 Sakany: 60mm, hahavony: 42mm, hatevin'ny 20mm. Haavon'ny famatorana: Haavo mazava 36mm, Diameter 11mm, Halavirana: 28mm.
BD-85A45 Sakany: 60mm, hahavony: 42mm, hatevin'ny 20mm. Haavon'ny gadra: mazava haavo 59mm, savaivony 11mm, elanelana: 28mm.
aluminium Padlock BD-85B11 Sakany: 39mm, hahavony: 40mm, hatevin'ny 19mm. Haavony amina: 38mm.
BD-85B15 Sakany: 39mm, hahavony: 40mm, hatevin'ny 19mm. Haavony amina: 78mm.
Padlock fiarovana azo antoka BD-8531 45mm halavany, 40mm ny sakany, 19mm ny hateviny, savaivony gadra 6mm, rojo vy 38mm
Padlock fiarovana amin'ny alàlan'ny aliminioma BD-8541 45mm halavany, 40mm ny sakany, 19mm ny hateviny, savaivony gadra 6mm, rojo vy 38mm
Padlock fiarovana azo antoka varahina BD-8551 45mm halavany, 40mm ny sakany, 19mm ny hateviny, savaivony gadra 6mm, rojo vy 38mm
Padlock fiarovana amin'ny vy voarindra BD-8561 Halavany 36.2mm, 40mm sakany, 23.5mm matevina. Haavony Shackle: 27mm
BD-8565 Halavany 36.2mm, 40mm sakany, 23.5mm matevina. Haavony amina: 46mm
Long Lock Body Security Padlock BD-8571 Lava 80mm, 40mm sakany, 19mm matevina. Haavony amina: 38mm.
BD-8575 Lava 80mm, 40mm sakany, 19mm matevina. Haavo Shackle: 76mm
BD-8571n Lava 80mm, 40mm sakany, 19mm matevina. Haavony amina: 38mm. Kitapo fanidiana nylon, miaraka amina toetran'ny insulation.
BD-8575n Lava 80mm, 40mm sakany, 19mm matevina. Haavo Shackle: 76mm. Kitapo fanidiana nylon, miaraka amina toetran'ny insulation.
Padlock fiarovana amin'ny vy tsy misy fangarony ABS BD-8581 Halavany 43mm, 35mm ny sakany, 15mm hateviny, Diameter gadra 4.95mm. Haavony amina: 38mm
Padlock fiarovana amin'ny vovoka ABS BD-8591 Ny halavany 45mm, ny sakany 40mm, ny hatevin'ny 19mm, ny savaivony gadra 6 mm. Haavony amina: 38mm.
BD-8595 Ny halavany 45mm, ny sakany 40mm, ny hatevin'ny 19mm, ny savaivony gadra 6 mm. Haavo Shackle: 76mm.
BD-8591n Ny halavany 45mm, ny sakany 40mm, ny hatevin'ny 19mm, ny savaivony gadra 6 mm. Haavony amina: 38mm. Kitapo fanidiana nylon, miaraka amina toetran'ny insulation.
BD-8595n Ny halavany 45mm, ny sakany 40mm, ny hatevin'ny 19mm, ny savaivony gadra 6 mm. Haavo Shackle: 76mm. Kitapo fanidiana nylon, miaraka amina toetran'ny insulation.
Fanamarihana sy famantarana momba ny fiarovana ny PVC BD-8611 PVC Tags, halavany: 145mm, sakany: 75mm, hateviny: 0.8mm, savaivony Keyhole: 8mm, fitaovana PVC
BD-8621 Famantarana fampitandremana miraikitra, fangatahana fanontana: ny refy sy ny atiny dia afaka ampanjifaina isaky ny fangatahana, fitaovana miraikitra.
Insulation Plastika Padlock
IOS Certificate China Stand Safety Emergency Ey...
Good Quality Boyue Durable Abs Cable Lock Valve...
Best Price on Vacuum Mcb Simple Circuit Breaker...
ODM Factory China 2019 Hot Sale Safety Shower a...
Rapid Delivery for Safety Door Lock Cylinder Wi...
2020 Latest Design China Hot Sale Orange Long S...
Marst Safety Fitaovana (Tianjin) Co., Ltd